Libaax baxsaday oo labo qof ku dhaawacay Muqdisho lana wareegay guri * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 On Nov 29, 2014
Mareeg.com: Libaax ay qoys ku heysteen guri ku yaalla degmada Yaakhshiid oo baxsaday ayaa dhaawacay labo caruur ah, wuxuuna libaaxu la wareegay gurigii dadkaas ay deganaayeen.
Arrintaan ayaa dhacday xaafadda Juungal, agaraarka COCACOLA ee degmada Yaakhshiid, sida uu xaqiijiyey goobjooge halkaas ku sugan.
Libaaxa ayaa markii uu baxsaday dhaawacay gabar yar, taasoo uu madaxa ka dhaawacay, waxaana gabartaas loo qaaday Isbitaalka Madiina.
Mar kale oo dadku isku dayeen iney guriga alaab kala baxaan ayuu weerar kale ku qaaday dadkaas, wuxuuna dhaawacay wiil kale, kaasoo isna la dhigay Isbitaalka Shifo.
Libaaxa ayaa shalay galaa ilaa saak ku dhex meereysanaya guriga, waxaana dadka xaafadda soo wajahay cabsi.
Maamulka degmada Yaakhshiid ayaan weli ka hadlin libaaxaan weerarka ku qaaday dadka, islamarkaana la wareegay guriga ay deganaayeen dadka uu dhaawacay.